စားသောက်ဆိုင်၊မုန့်ဈေးတန်း၊ကော်ဖီဆိုင် များအတွက် ရောင်းချသည့်စနစ်…
မည်သည့်နေရာ မည်သည့်အချိန် မည့်သည့်စက်ကိရိယာဖြင့်မဆို သင့်၏စားသောက်ဆိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
CUKCUK သည် ဘယ်စားသောက်ဆိုင်အမျိုးအစားနှင့်မဆိုကိုက်ညီသည်။
အဓိကရရှိနိုင်သော သောက်သုံးစရာများ: ကော်ဖီ, smoothies, မုန့်နှင့်ဖျော်ရည်များ
အသားနဲ့ပြုလုပ်ထားသည့်အစားသောက်များကို အဓိကအားဖြင့် အမဲသား၊ကြက်သား ပုစွန်စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။…
အဓိကရရှိနိုင်သောအရာများ beer, wine, cocktails… customer sများစိတ်ကြိုက်ပွဲကြီးပွဲသေးမုန့်အချိုပွဲများ
သင်၏အောင်မြင်သော စီးပွားရေးကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး မည်သည့်စက်ပစ္စည်းဖြင့်မဆို cloud technologyဖြင့် အဝေးမှ ထိန်းချုပ်နိုင်မည်။ တိကျမှန်ကန်စွာ သတင်းပေးပို့ခြင်းကြောင်း သင့်လုပ်ငန်းအတွက် တိုးတက်နိုင်မည့် ထိရောက်သော ဆုံးဖြတ်ကိုချမှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
CUKCUKဖြင့် သင်သည် သှိလှောင်ရုံထဲမှ ကုန်ကြမ်းများကိုအမြဲထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏စားသောက်ဆိုင်အတွက် ပစ္စည်းများလုံလောက်မှုရှိမရှိ၊စားသောက်ကုန်များသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုရှိမရှိ၊ဘယ်ကုန်ကြမ်းများ အကုန်ဆုံးလဲ စတာတွေကို သင်သည်လျင်မြန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
သိုလှောင်ရုံတွင်အတွက်ပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ ရောင်းသည့်နေရာတွင် ငွေများပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အော်ဒါများစွာ ပယ်ဖျက်ခြင်းများစသည့် ခက်ခဲလှသည့် ထိန်းချုပ်မှုများကို ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။CUK CUK သည် သင်၏စားသောက်ဆိုင်အတွက်ပြဿနာများကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။.
CUK CUK ဖြင့် အော်ဒါများ၊ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ငွေရှင်းခြင်း များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။CUK CUK သည် သမားရိုးကျ ဝန်ဆောင်မှုများထက်၅၀%အထိဝန်ဆောင်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီး အမှားများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
Discount အစီအစဉ်များ အခွန်များ အထူးဈေးနှုန်းများ နှင့် ငွေစာရင်းပြေစာများကို အလိုအလျောက်တွက်ပေးနိုင်သည်။CUKCUK ဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောဘေလ်များကို စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် cashier များကတွက်ချက်ပေးနိုင်သည်။အလျင်လို သောအခါတွင်လည်း စားသုံးသူများစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲ လျင်မြန်လွယ်ကူစေသည်။.
CUKCUK ဖြင့် ဆိုင်ရှင်သည် နေရာများစွာကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ရုံးချုပ်အတွက်လည်း ရောင်းချမည့်လမ်းကြောင်းများ၊ menu အပြောင်းလဲများ၊ ဈေးအတက်အကျများကဲ့သို့ သင့်စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
ယုံကြည်ခြင်း- စီးပွားရေး – လွယ်ကူခြင်း
Online နှင့် offline mode
Cloud နည်းပညာဖြင့် သင်သည် အချိန်တိကျစွာ နေရာမရွေးအချိန်မရွေး မည့်သည့်ဖုန်းနှင့်မဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။အင်တာနက်လိုင်းကျပါကလည်း CUKCUK သည် စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အဆက်မပြတ်ပဲလည်ပတ်နိုင်သည်။.
CUKCUK သည်PC, printer, POS system, tablets, smart phones စသည်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ဒါကြောင့်သင်သည် hardwareအတွက်အကုန်အကျသက်သာစေသည်။.
သင်၏ဝန်ထမ်းများလေ့လာသည့်အခါတွင်လည်းနှစ်နာရီထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးစရာမလိုဘဲ Software ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
ဝန်ထမ်းများသည် CUKCUK ကိုအချိန်တိုတွင်းလွယ်ကူစွာလေ့လာအသုံးပြုနိုင်သည်။.
မြန်ဆန်ခြင်း၊လုံခြုံခြင်း နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပြီး Cloudမှတဆင့်အချိန်မှန်ကန်စွာ reportများရနိုင်သည်။ အင်တာနက်မလိုဘဲစားသောက်ဆိုင်အတွင်း LAN ကွန်ရက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။.
CUKCUK သည်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်၊ကော်ဖီဆိုင်၊bistros၊ bars၊ pubs စသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။.
ဖောက်သည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားပင်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်စားသုံးသူများကို ဝန်ဆောင်ကောင်းများအမြဲပေးနေမည်ဖြစ်သည်။
“ယုံကြည်ခြင်း – အဆင်ပြေခြင်း – အလေးထားခြင်”
ကျွန်တော်ဟာ အလုပ်များသော်လည်း CUKCUK ကိုအသုံးပြုပြီး ကျွန်တော့်ဆိုင်ရဲ့ အခြေအနေကို ဖုန်းပေါ်မှ တဆင့် နားလည်နိုင်ပါတယ်။CUKCUK ဟာ အလွန်သုံးရလွယ်ကူပြီး ကျွန်တော့် ဝန်ထမ်းများလဲ အသုံးပြုပုံကို အချိန်အများကြီးပေးပြီး သင်ယူစရာမလိုပါဘူး။CUKCUK ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ကုန်ကြမ်းများဝယ်ယူရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါတယ်။.
Othentic စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် Owner
CUKCUK ဟာ ကျွန်မရဲ့ စားသောက်ဆိုင် ၅ ဆိုင်က်ို စီမံခန့်ခွဲ နိုင်ဖို့ ကူညီပေးနေပါတယ်။အခုဆိုရင် ကျွန်မဟာ စားသောက်ဆိုင်အားလုံးရဲ့ အရောင်းစာရင်းတွေကို ဖုန်းပေါ်မှာတင် အချိန်မရွေး ကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဝန်ထမ်းတွေ လည်း ဆော့ဝဲလ်ကို အချိန်တိုအတွင်းမှုာဘဲ အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဟာ တက်ဘလက်ခ်၊ဖုန်းတွေကို အသုံးပြုပြီး စားပွဲဘေးမှတင် အော်ဒါများကို မှာယူနိုင်ပါတယ်။CUKCUK ကိုရွေးချယ်မိလို့ ကျွန်မ ဝမ်းသာပါတယ်။.
Golden Pho စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် Owner
CUKCUK ဟာ ကျွန်မဆိုင်မှာ အင်တာနက်လိုင်းကျနေတဲ့ အခါမျိုးမှာလဲ ချောချောမွေ့မွေ့ လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။CUKCUK ရဲ့ ဆားဗစ်စ် ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့ကိုလည်း နှစ်သက်မိပါတယ်။အရမ်းကို ကျွမ်းကျင်ပြီး စိတ်ကူးလည်း ကောင်းပါတယ်။ကျွန်မ ကတော့ CUKCUK ကိုဆက် အသုံးပြုပြီး အခြားသူတွေကိုလည်း အသုံးပြုဖို့ ထောက်ခံပေးသွားမှာပါ။.
Eclipse ဟာ မတူညီတဲ့နေရာအပိုင်းအခြားများနဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဘားတခု ဖြစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။သို့သော်လည်း CUKCUK ကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ ဝန်ထမ်းများကို အော်ဒါများမှာယူပြီး ကြိုးမဲ့နည်းပညာဖြင့် မီးဖိုခန်းကိုပို့ဆောင်ရန် နှင့် ဖောက်သည်များ အချိန်နှင့်သင့်လျော်စွာ ငွေရှင်းနိုင်ရန် တို့ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါ တယ်။ကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာမှာ ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ရင်လည်း CUKCUK ကိုဘဲဆက်သုံးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ CUKCUK ရေ။.
Eclipse ဘားမန်နေဂျာ Manager
ကျွန်မ က အမြဲတမ်း စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ ခရီးသွားနေရတဲ့ အတွက် စားသောက်ဆိုင် အခြေအနေ တွေကို ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် သိရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ရောင်းချမှုအခြေ အနေ၊ရောင်းအား အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေ၊ဖောက်သည်အရေအတွက်တွေ အစီအရင်ခံမှုများစသည်ဖြင့် ဖုန်းကတဆင့်ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။ကျွန်မဝန်ထမ်းတွေ ကလည်း အက်ပလီကေးရှင်း ကို ဖုန်း၊တက်ဘလက်ခ် နဲ့ သုံးရတာ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ CUKCUK ဟာ အသုံးပြုရတာ၊အော်ဒါမှာယူရတာ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ကျွန်မ CUKCUK ကိုတကယ်ဘဲ နှစ်သက်မိပါတယ်။.
Sofaer & Co စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် Owner
ကျွန်မတို့ဆိုင်က ဝန်ဆောင်မှု အမြန်ပေးရတဲ့ ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။CUKCUK ဟာ ကျွန်မတို့ကို ပိုပြီးမြန်ဆ န်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။CUKCUK ဟာ ကျွန်မကို ကုန်ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန် များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရာ ကူညီပေးနေတာကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းတွေ ပြတ်လတ်သွားမှာကို ကျွန်မ အနေနဲ့ စိတ်ပူနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။”.